Lottery.com ကိုစဉ်းစားပါ ထီလုပ်ငန်း အရာအားလုံးထီဘို့သင်၏တစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်အဖြစ်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်: ပြည်နယ်ထီရလဒ်များ, ထီပေါက်စုစုပေါင်း, မဲနှိုက်ရက်စွဲများ, ဂိမ်း countdown, အနိုင်ရနံပါတ်များနှင့်အခြား!
အချို့သောပြည်နယ်များမှာတော့သင်ပင်ညာဘက်သင့်ဖုန်းမှရပ်တည်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်တွင် Powerball နှင့် Mega သန်းနဲ့ချီကစားနိုင်ပါတယ်။
Lottery.com ၏နိုင်ငံတကာထီရလဒ်များကိုကြည့်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ https://lottery.com/results/international/.
AZ Mega သန်းပေါင်းများစွာ
5 Card ကိုငွေ
Arkansas ပြည်နယ် (AR)
AR Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ငွေသား3ညနေပိုင်း
ငွေသား3မှနျးတညျ့အခြိနျ
ငွေသား4ညနေပိုင်း
ငွေသား4မှနျးတညျ့အခြိနျ
, CA Powerball
, CA Mega သန်းပေါင်းများစွာ
SuperLotto Plus အား
နေ့စဉ်3ညနေပိုင်း
နေ့စဉ်3မှနျးတညျ့အခြိနျ
CO Mega သန်းပေါင်းများစွာ
3 ညနေပိုင်း Pick
3 မှနျးတညျ့အခြိနျ Pick
မှန် CT Powerball
မှန် CT Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ကံကောင်း Links များနေ့
ကံကောင်း Links များည
3 နေ့ Play
3 ည Play
4 နေ့ Play
4 ည Play
DE Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ကိုလံဘီယာ၏ခရိုင် (DC က)
DC က Mega သန်းပေါင်းများစွာ
Mega သန်းပေါင်းများစွာ FL
4 ညနေပိုင်း Pick
4 မှနျးတညျ့အခြိနျ Pick
2 မှနျးတညျ့အခြိနျ Pick
2 ညနေပိုင်း Pick
5 မှနျးတညျ့အခြိနျ Pick
5 ညနေပိုင်း Pick
GA Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ငွေသား4ည
ဂျော်ဂျီယာ FIVE မှနျးတညျ့အခြိနျ
ဂျော်ဂျီယာ FIVE ညနေပိုင်း
ငွေသား3ည
ID ကို Powerball
Mega သန်းပေါင်းများစွာ ID
3 ည Pick
3 နေ့ Pick
IL Mega သန်းပေါင်းများစွာ
LuckyDay Lotto ညနေပိုင်း
LuckyDay Lotto မှနျးတညျ့အခြိနျ
quick Draw ညနေပိုင်း
quick Draw မှနျးတညျ့အခြိနျ
နေ့စဉ်4မှနျးတညျ့အခြိနျ
နေ့စဉ်4ညနေပိုင်း
IA Mega သန်းပေါင်းများစွာ
အိုင်အေ Lotto အမေရိက
Kansas ပြည်နယ် (KS)
KS Mega သန်းပေါင်းများစွာ
2 အားဖြင့် 2
စူပါ Kansas ပြည်နယ်ငွေ
ငွေသား Ball ကို
LA Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ငါ Mega သန်းပေါင်းများစွာ
4 နေ့ Pick
Megabucks Plus အား
MD Mega သန်းပေါင်းများစွာ
MA Mega သန်းပေါင်းများစွာ
MI Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ဂန္ထဝင် Lotto 47
MN Mega သန်းပေါင်းများစွာ
မစ္စစ္စပီ (က MS)
MS Mega သန်းပေါင်းများစွာ
မစ်ဆူရီ (MO ကို)
MO Mega သန်းပေါင်းများစွာ
MT Mega သန်းပေါင်းများစွာ
Big က Sky အပိုဆု
NE2က 2
New Hampshire (နယူးဟမ်းရှား)
NH Mega သန်းပေါင်းများစွာ
NJ Mega သန်းပေါင်းများစွာ
6 Lotto Xtra Pick
ဂျာစီငွေ4Xtra
မိုင် Mega သန်းပေါင်းများစွာ
နယူးယော့ Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ဦးဝင်း4မှနျးတညျ့အခြိနျ
ဦးဝင်း4ညနေပိုင်း
NC Mega သန်းပေါင်းများစွာ
Rolling ငွေ 5
ဥက္ကလာဟိုးမား (OK ကို)
အိုကေ Mega သန်းပေါင်းများစွာ
အိုကေ Lotto အမေရိက
OR Mega သန်းပေါင်းများစွာ
4 1PM Pick
4 4PM Pick
4 7PM Pick
4 10PM Pick
Pennsylvania ပြည်နယ် (PA ဆိုပြီး)
PA Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ပွဲစဉ်6Lotto
ဘဏ္ဍာကို Hunt က
5 နေ့ Pick
2 နေ့ Pick
Puerto Rico (PR စနစ်)
PR Mega သန်းပေါင်းများစွာ
Rhode Island (RI က)
RI Mega သန်းပေါင်းများစွာ
SC Mega သန်းပေါင်းများစွာ
Palmetto ငွေ 5
SD Mega သန်းပေါင်းများစွာ
SD က Lotto အမေရိက
Tennessee ပြည်နယ် (TN)
TN Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ငွေသား3နံနက်
ငွေသား4နံနက်
TX Mega သန်းပေါင်းများစွာ
နေ့စဉ်4နေ့
နေ့စဉ်4ည
3 နံနက် Pick
နေ့စဉ်4နံနက်
တက္ကဆက်ပြည်နယ် Triple ချန့်စ
Mega သန်းပေါင်းများစွာ VT
Virgin Islands (VI ကို)
VI ကို Powerball
VI သန်း Mega သန်း
ဗာဂျီးနီးယား (VA သို့)
VA သို့ Powerball
VA သို့ Mega သန်းပေါင်းများစွာ
ငွေသား5နေ့
ငွေသား5ည
4 ည Pick
Mega သန်းပေါင်းများစွာ WA
WV Mega သန်းပေါင်းများစွာ
WV Lotto အမေရိက
Wisconsin ပြည်နယ် (WI)
WI Mega သန်းပေါင်းများစွာ
Mega သန်းပေါင်းများစွာ WY